Induction Aluminium Lausanne Process
Induction aluminium aluminium dia mihamitombo hatrany hatrany amin'ny orinasa. Ny ohatra iray dia ohatra manodina fantsona maro isan-karazany amin'ny vatan'ny fiara mifono vy. Aluminium dia mitaky herinaratra be loatra mba hampatanjaka ny fampiasana ny induction ary ny fitantanana ny fitantanana azy dia 60% raha oharina amin'ny varahina. Ny famolavolan'ny kofehy sy ny fotoana ho an'ny hafanana hikoriana dia tena manakiana amin'ny famolavolana fandaminana mahomby amin'ny alim-bary. Ny fandrosoana vao haingana amin'ny alàlan'ny fametrahana aluminium-tavoahangy aluminium dia namela ny fampidiran-drivotra mba hanoloana ny afo sy ny fanamainam-pofoana ao anaty lafaoro amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny alim-borona.
Ny famokarana mahomby amin'ny famokarana aluminium dia mitaky ny fitaovana famonosana tsara indrindra ho an'ny alim-pandehan'ny alim-bary ampiasaina ao amin'ny faritra ary ny fikolokoloana marina ho an'ny fiarovan-tena. Ny mpanamboatra fitaovam-piofanana Braze dia manana alim-bary vita amin'ny alim-bary ary ireo fitaovana mifototra amin'ny alikaola.
Sokajy Technologies Tags ny alim-bosotra avo lenta, Induction Aluminum Brazing, RF induction ny alim-bolafotsy Post Fikarohana
Famolavolana alim-bary miaraka amin'ny famolavolana
Inona ny coil & induction heating induction?